ဒဿနပညာရှင်: မာတင် Vrijland
အတွက် Filed ဒဿနပညာရှင်	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 13 2017 အပေါ်	• 8 မှတ်ချက်
မသေခြင်းမှနာနိုနည်းပညာနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးခဲကဘာလဲ? အဘယ်အရာကို Ray Kurzweil Google နှင့် Michio Kaku (Discovery Channel ကိုကနေလူသိများ) အဖြစ် transhumanists တန်းတူခံယူခြင်းနှင့်ကျွန်တော်နာနိုနည်းပညာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအားလုံးဇီဝသေတတ်သောဆဲလ်တွေနေရာမှာအစားထိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအရာကနေမျိုးဗီဇအားနည်းချက်တွေကိုမေတ္တာပရိုဂရမ်ဆဲလ်တွေပွား ? အဘယ်ကြောင့် [ ... ]
အဆိုပါ aftapwet: အဦးထုပ်ရော်နယ်အောင်နိုင် Plasterk အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒ!
အတွက် Filed ဒဿနပညာရှင်	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 12 2017 အပေါ်	• 16 မှတ်ချက်
သငျသညျသူ့ကိုရုတ်တရက်စတုတ္ထ Balkenende အစိုးရအောက်မှာ Buitenhof ပညာရေးဝန်ကြီးယဉ်ကျေးမှုနှင့်သိပ္ပံမှာပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်နှင့်စပီကာများကဘာမျှမထံမှအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်တဲ့သူတွေကိုစူပါစာနာဝန်ကြီးကိုငါသိ၏။ အဆိုပါရွှင်လန်းသောဖက်ရှင်ရော်နယ်အောင်နိုင် Plasterk င်း၏ထူးခြားတဲ့အနည်းငယ်လှုနှင့်ဝိသေသနှာခေါင်းအားဖြင့်ဖြစ်ကောင်းအထူးသဖြင့်မှတ်မိသည်။ တခါတရံသူက [ ... ] တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဦးထုပ်နှင့်အကျီ
အမ်စတာဒမ်ဂိမ်းကုမ္ပဏီပြောက်ကျားအားကစားပြိုင်ပွဲ 1e ၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းသုည Dawn လုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဦးတည်ခြေလှမ်း
အတွက် Filed ဒဿနပညာရှင်	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 11 2017 အပေါ်	•7မှတ်ချက်
အဆိုပါရုပ်မြင်သံကြား VPRO နောက်ခံအလင်းအစောပိုင်း 16 2017 အတွက်ဂိမ်းထဲမှာအားလုံး "ဆိုတဲ့ program တစ်ခုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကကောင်းစွာရှေးခယျြသောအမည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကောင်းသောပုံရိပ်သည်ကမ္ဘာ့ယူဆောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သန်းပေါင်းများစွာတစ်ခု ပို. ပို. ကြီးထွားလာပရိသတ်ကိုဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်း [ ... ] ပို. လက်တွေ့ဖြစ်လာကြပြီးတဖြည်းဖြည်း '' linear '' ကနေအသွင်ပြောင်းနေကြတယ်
တူရကီနှင့်အီရန်, အစ္စရေးအပေါ်ပရောဖက်ပြုတိုက်ခိုက်မှုနှင့် Luciferian ကမ္ဘာကြီးအစိုးရဆီသို့လမ်းပြမြေပုံ
အတွက် Filed ဒဿနပညာရှင်	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ 27 2017 အပေါ်	• 32 မှတ်ချက်
အစောပိုင်းကငါ script ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်ဘာသာရေးပရောဖက်ပြုငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်သောအဖြစ်မှန် file ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ ငါသည်လည်းတူရကီယေဇကျေလ၏စာအုပ် (ကဒီမှာကြည့်ပါ) တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်မာဂေါဂအာဒိုဂန်၏မာဂေါဂနှင့်ဂေါဂ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ သငျသညျကောက်နှင့်မျှမအိုး [ ... ] ", စဉ်းစားခြင်းမပြုမီ
အဆိုပါအင်တာနက်, အသိပညာ, Apple နှင့်ထာဝရအသက်ကိုပင်၏အသီး
အတွက် Filed ဒဿနပညာရှင်	by မာတင် Vrijland	ဇွန်လ32017 အပေါ်	•3မှတ်ချက်
Nicolaus Copernicus နေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်၏အလယ်ဗဟိုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်မြေကြီးနေရောင်ကမ္ဘာတစ်ခုသာဂြိုဟ်ခဲ့တာအေဒီ 1543 ၌အကြှနျုပျတို့၏သမိုင်းအရသိရသည်ရေးသားခဲ့သည်။ အဲဒီအခြိနျမှာဒီအတွေး [ ... ] သူရှည်လျားသညျမဟာနက္ခတ္တဗေဒအလုပ်ရေးသားခြင်းအတွက်ချပြီးနှောင့်နှေးသောကြောင့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်
အတွက် Filed ဒဿနပညာရှင်	by မာတင် Vrijland	ဒီဇင်ဘာလ 29 2016 အပေါ်	• 19 မှတ်ချက်
Madam Helena Petrovna Blavatsky အမှန်တကယ်ဘာသာတရားအားလုံးကိုပေါင်းစည်းတံ့သောနယူးခေတ်လှုပ်ရှားမှု၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး 1 ကမ္ဘာကြီးအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်ဦးနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုဘာသာတရားလေ့လာဖို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ [ ... ] တစ်ဦးတည်းဒါကတကယ်တော့, ဒီအမျိုးသမီးချမ်းသာကြွယ်ဝစက်ဝိုင်းမှလာသောနိမိတ်လက္ခဏာကိုပါပြီသင့်တယ်
သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှတို့သည်မတရားမှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မလဲ
အတွက် Filed ဒဿနပညာရှင်	by မာတင် Vrijland	11 စက်တင်ဘာလ 2016 အပေါ်	•2မှတ်ချက်
သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှတို့သည်မတရားမှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မလဲ ဒါကလူများစွာပါသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ Added ကြောင့်သင်ရုံအပျက်သဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ကြာကြောင်းမကြာခဏထို့နောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လူများကလည်း [ ... ] သင့်ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်မှန်ဖန်တီးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်, ဒါကြောင့်သင်မတရားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်မှန်လျှင်, ပေး
အတွက် Filed ဒဿနပညာရှင်	by မာတင် Vrijland	ဒီဇင်ဘာလ 14 2015 အပေါ်	• 12 မှတ်ချက်
စာတန်အကြောင်းကိုဤမျှလောက်စကားပြောအဘယ်ကြောင့်စာဖတ်သူများအနေဖြင့်အတော်များများပံ့ပိုးမှုများကို, မေးခွန်းမေးသလဲ? တစ်ဦးကိုစာတနျရှိပါလျှင်ဧကန်အမှန်လည်းဘုရားသခငျဖွစျရပါမညျနညျး ဒီ website တွင်ဖွင့်ကောက်သူကိုစာဖတ်သူများအဘို့ဤလုံးဝတန်ရာမေးခွန်းများကိုဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံခုနှစ်တွင်မျှဘုရားသခင်နှင့်အရာခပ်သိမ်း [ ... ] ရှိစေခြင်းငှါ,
မှော်ခုန်ပျံကျော်လွှားနေတဲ့ Google ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောသမမွှေများထင်ယောင်ထင်မှားနှင့်အဖြစ်မှန်
အတွက် Filed ဒဿနပညာရှင်	by မာတင် Vrijland	အောက်တိုဘာလ 26 2015 အပေါ်	•2မှတ်ချက်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါထိုကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာကုဒ်အဖြစ်ပြုမူသော "string ကိုသီအိုရီ (string ကိုသီအိုရီ) နဲ့ဝဠာ၏ဖော်ပြချက်အဖြစ်သိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက်, (ဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ) တစ်ဦးကိုကိုးကားဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကို virtual ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ငါသည်လည်းတစ်ဦးခြင်း simulation အတွင်းခြင်း simulation များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဒါက [ ... ] အားဖြင့်အကောင်းဆုံးနားလည်
အကွိမျမြားစှာရှုထောင့်, ဆော့ဖ်ဝဲ Simulator, စိတ်ထဲသို့မဟုတ်ဝိညာဉျသ။ အဘယ်အရာကိုစစ်မှန်တဲ့ပါသလဲ
အတွက် Filed ဒဿနပညာရှင်	by မာတင် Vrijland	အောက်တိုဘာလ 20 2015 အပေါ်	• 27 မှတ်ချက်
ဟီးဘရူးဘာသာစကားတခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါး၌ငါဝဠာဆော့ဖ်ဝဲခြင်း simulation တူသောဘာမှရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ရှင်းပြသည်။ ငါသည်အဦးဆုံးသောနှင့်သာမဟုတ်, ပင် astrophysicist နှင့်ဂျော့ခ်ျ Smoot ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းမေးခွန်းကိုလိုက်နာစောင့်ထိန်းနိုဘယ်ဆုဆုရှင်ခေါ်တော်မူသောသူတဦးတည်းမဟုတ်ဘူး။ သူသူက "နည်းနည်းခဲ့သောဤ TED ကိုတင်ဆက် [ ... ] အတွက်ကပြောပါတယ်ပေမယ့်